Arsenal Oo Guul Muhiim Ah Kasoo Gaadhay Dhigeeda Bournemouth, Aubameyang Oo Geesiga Kulankan Ee Gunners Noqday Xilli Ay Guuldaro La'aan Yihiin Kulankii 17-aad Oo Xidhiidh Ah. - Gool24.Net
Arsenal Oo Guul Muhiim Ah Kasoo Gaadhay Dhigeeda Bournemouth, Aubameyang Oo Geesiga Kulankan Ee Gunners Noqday Xilli Ay Guuldaro La’aan Yihiin Kulankii 17-aad Oo Xidhiidh Ah.
Kooxda Arsenal ayaa guul kasoo gaadhay dhigeeda Bournemouth oo ay marti ugu ahayd gegida Vitality Stadium, Gunners ayaa guushan uga mahad celinaysa weeraryahanka kooxdeeda ee Aubameyan kaddib gool uu si qaldan iskaga dhaliyay xiddiga Bournemouth ee Lerma iyo gool uu isla Bournemouth u dhaliyay King.
Guushan ayaa micno gaar ah u leh kooxda ree London iyo tababaraheeda Unai Emery maadaama oo ay tahay kulankii 17-aad ee xidhiidh ah ee aysan guuldaro qaabilin tartamada oo dhan.
Keydka: Boruc Surman, Mousset, Lewis Cook, Defoe, Stanislas, Mings.
Keydka: Cech, Elneny, Ramsey, Ozil, Maitland-Niles, Guendouzi, Nketiah
Kooxda Bournemouth ayaa markiiba weeraro ku qaaday dhigeeda Arsenal, Weeraryahanka kooxda martida loo ahaa ee Callum Wilson ayaa daqiiqadii 17-aad ee kulankan kubad madax ah ku tijaabiyay shabaqa Arsenal balse wuxuu ku fashilmay inuu dhaafiyo goolhaye Bernd Leno.
Arsenal ayaa markeeda iska weerartay Bournemouth, Da’yarka kulankan buuxinayay booskii Alexandre Lacazette ee Alex Iwobi ayaa kubad ku tuuray shabaqa Asmir Begovic walow uusan goolka gaadhin.
Intaa kaddib ciyaarta ayaa noqotay mid fursan, Kooxaha Eddie Howe iyo Unai Emery ayaa weeraaro toos ah isku qaadayay iyadoo koox kasta laga filan karayay goolka furitaanka.
GOOAL: Saed Kolasinac ayaa kubad hor maris ah kasoo tuuray garabka midig waxaana nasiib darro shabaqa goolkiisa si qaldan kubadda u dhex dhigay khadka dhexe ee Bournemouth ee Jefferson Lerma.
Intaa kaddib xiddigaha Gunners ee Iwobi iyo Mkhitaryan ayaa sameeyay isku dayo ay ku doonayaan inay hoggaanka ugu dheereeyaan kooxdooda balse ma suurogalin.
GOOAL: Bournemouth ayaa diiday in goolka laga hoydo qayba hore, Kubad ay si wada jir ah uga soo shaqeeyeen Wilson iyo Brooks ayaa u saamaxday weeraryahan Joshau King inuu darbad xoogan dhex dhigo goolka uu masuulka ka yahay Leno.
Qaybta hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay bar-bardhac min hal gool ah, Labada kooxood ayaa sameeyay fursado la taaban karo balse aan badnayn.
Qaybtii dambe ee kulanka ayaa ku bilaabantay qaab aad u xoogan, Xiddiga ahaa caawiyaha goolkii hore ee Bournemouth ee Crooks ayaa isku dayay inuu hoggaanka gacanta u geliyo kooxdiisa balse darbadiisa ayaan noqonin mid najaxday.
GOOAL: Arsenal ayaa fursadeeduu ugu horreysay ee muhiim ah ee qaybta dambe gool u bedeshay, Weeraryahanka ree Gabon ee Aubameyang ayaa dhammaystiray kubad hadiyad ah oo uu goolka soo hordhigay Kolasinac oo kulankan si weyn iskugu muujiyay.
Mkhitaryan ayaa markale qarka u fuulay inuu hoggaanka u dheereeyo kooxdiisa, Kubad uu si wanaagsan uga soo shaqaystay xiddiga ree Armenia ayaa bad-baadin ku qasabtay goolhaye Begovic.
Khadka dhexe ee Bournemouth ee Ryan Fraser ayaa markiisa isku day sameeyay balse waxa uu ku fashilmay inuu natiijada bar-bardhac uga dhigo kooxde Eddie Howe.
KHATAR: Bournemouth ayaa daqiiqadii 80-aad ee kulanka abuurtay fursad ay ciyaarta kaga dhigi karaysay 2-2, Stanislas oo bedel ku yimid kulankan ayaa ku fashilmay inuu kooxdiisa si wanaagsan ugu tuuro darbo aad ugu dhaw shabaqa Gunners waxaana si fudud ku qabsaday kubadda Leno.
Ugu dambayn, Kulankan ayaa kusoo dhammaaday guul 1-2 ah oo ay gaadhay Arsenal, Kulankan ayaa ah midkii 17-aad ee Gunners aysan wax guuldaro ah la kulmin tartamada oo dhan.